Thursday, 15 October 2020 11:33
မန္တလေး- လားရှိုး- မူဆယ် - ဗန်းမော်- မြစ်ကြီးနား ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး လေးလမ်းသွားအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်
မန္တလေး- လားရှိုး- မူဆယ် - ဗန်းမော်- မြစ်ကြီးနားလမ်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊
Wednesday, 14 October 2020 12:18
မဲသရော - လှိုင်ကွယ် (ကရင်ပြည်နယ်အပိုင်း)အား ကတ္တရာကွန်ကရစ်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးစီ
မုဒုံ - ချောင်းနှစ်ခွ - မဲသရော - လှိုင်ကွယ်အပိုင်းအား မုဒုံ -ချောင်းနှစ်ခွ - မဲသရော - လှိုင်းကွယ်(ကော့ကရိတ်) လမ်းအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီး မုဒုံ - မြဝတီလမ်း အမည်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပြီး မုဒုံ - ချောင်းနှစ်ခွ - မဲသရော - လှိုင်းကွယ်(ကော့ကရိတ်) လမ်းအပိုင်းအနက် မဲသရော - လှိုင်းကွယ် လမ်းအပိုင်းသည် ကရင်ပြည်နယ် အပိုင်းဖြစ်ကာ (၂၆)မိုင် (၃)ဖာလုံ ရှည်လျားသည်။
မြိုင်မြို့နယ်၌ စိုက်ပျိုးမြေဧက ၁၇၀၀ အကျိုးပြုမည့် ကုန်ထုတ်လမ်းနှစ်လမ်းဖောက်လုပ်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီး
Tuesday, 13 October 2020 14:29
အိန္ဒိယ- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအစိုးရက ချင်းပြည်နယ်တွင် မံဆောင်ကြိုးတံတားသစ်တည်ဆောက်နေကြောင်းသိရသည်။
Saturday, 10 October 2020 13:51
အုတ်စီရာတွင် ဘိလပ်မြေနှင့် အုတ်ကုန်ကျတာလေးတွေကို ဝါသနာပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ များအတွက် ပြန်တင်ပေးတာပါ။
Saturday, 10 October 2020 12:23
MPCE 6th yr. Anniversary အထိမ်းအမှတ် အစီအစဥ်
MPCE 6th yr. Anniversary အထိမ်းအမှတ် အစီအစဥ်​တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MPCE စကားဝိုင်း အစီအစဥ်ပါ။
Friday, 09 October 2020 17:15
Monday, 05 October 2020 11:45
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတို့၏ ချစ်ကြည်ရေးစီမံကိန်းဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီး
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရတို့၏ ချစ်ကြည်ရေးစီမံကိန်းအရ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဌာနက ချင်းပြည်နယ်အတွင်း၌ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လုပ်ငန်း အားလုံး ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Sunday, 04 October 2020 11:28
ဒေါ်လာ ၃ ဘီလျံတန် မြေကွက်ပေါ်မှာ ဆောက်လုပ်မယ့် မှန်နံရံ ထပ်မြင့်အဆောက်အဦ
မှန်နံရံများဖြင့် အတိပြီးတဲ့ မိုးထိတိုက်တာတစ်ခုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက မြေကွက်အရောင်းအဝယ်တစ်ခုမှာ